“Nieritreritra aho hoe mankany an-danitra ny maty, na mankany amin’ny afobe, na any amin’ny afofandiovana. Izaho aloha tsy mendrika ny ho any an-danitra, nefa koa tsy ho lasa any amin’ny afobe. Tsy tena haiko anefa hoe inona ny afofandiovana. Tsy hitako tao amin’ny Baiboly daholo izany fa tenenin’ny olona fotsiny.”—Lionel.
“Nampianarina ahy hoe mankany an-danitra daholo ny maty nefa tsy resy lahatra tamin’izany aho. Amiko, rehefa maty ny olona dia vita hatreo ny aminy.”—Fernando.
Mankaiza marina ny maty? Mijaly any ho any ve izy ireny? Mbola hihaona amin’izy ireny ve isika? Inona marina no lazain’ny Baiboly? Andao aloha hodinihintsika hoe manao ahoana ny maty, araka ny Baiboly. Hojerentsika avy eo ny fampanantenana omeny momba ny maty.
Manao ahoana ny maty?
VALINY ARA-BAIBOLY: “Fantatry ny velona fa ho faty izy, fa ny maty kosa tsy mahalala na inona na inona, sady tsy mahazo valin-kasasarana intsony, satria hadino izay nahatsiarovana azy. Izay rehetra azon’ny tananao atao dia ataovy amin’ny herinao manontolo, fa tsy misy asa na eritreritra na fahalalana na fahendrena ao amin’ny Fasana, izay toerana halehanao.” *—Mpitoriteny 9:5, 10.
Ny hoe Fasana dia manondro ny toerana misy ny olona rehefa maty. Toerana an’ohatra ilay izy ary tsy mahatsiaro tena sady tsy afaka manao na inona na inona izay lasa any. Jereo, ohatra, i Joba mpanompon’Andriamanitra. Fongana ny fananany, maty daholo ny zanany, ary feno vay ny vatany. Inona no nangatahiny tamin’Andriamanitra? “Raha mba manafina ahy any amin’ny Fasana [“helo”, Dikan-tenin’i Douay, katolika] mantsy ianao.” (Joba 1:13-19; 2:7; 14:13) Tsy afobe àry no niheveran’i Joba ny Fasana satria vao mainka hitombo ny fijaliany raha mankany izy. Fantany kosa fa tsy misy fijaliana any.
Ho haintsika koa hoe manao ahoana ny maty raha jerentsika izay lazain’ny Baiboly momba ny olona valo nitsangana tamin’ny maty.—Jereo ny efajoro hoe “ Olona Valo Nitsangana Tamin’ny Maty.”
Tsy niteny izy valo hoe nijaly na hoe sambatra be, tamin’izy ireo maty. Tsy maintsy ho nitantara an’izay tsapany izy ireo raha nahita an’izany. Tsy maintsy ho nosoratana tao amin’ny Baiboly koa izany mba ho fantatry ny rehetra. Tsy misy an’izany anefa ao. Nahoana izy valo no tsy nitantara momba an’izany? Satria tsy nahatsiaro tena izy ireo, toy ny hoe natory be. Oharin’ny Baiboly amin’ny torimaso tokoa ny fahafatesana indraindray. Nolazaina, ohatra, hoe “natory ao amin’ny fahafatesana” i Davida sy Stefana, olo-marina.—Asan’ny Apostoly 7:60; 13:36, fanamarihana ambany pejy.
Misy antenaina àry ve ny maty? Mbola hitsangana ve izy ireo?
^ feh. 7 “Fasana” no nandikana an’ilay teny hebreo hoe “Sheôl” sy ilay teny grika hoe “Haides”, ao amin’ny Soratra Masina—Fandikan-tenin’ny Tontolo Vaovao. Misy Baiboly sasany mampiasa an’ilay teny hoe “helo.” Tsy mampianatra anefa ny Baiboly hoe hampijalijalina any amin’ny afobe ny maty.
OLONA VALO NITSANGANA TAMIN’NY MATY *
Zanaky ny mpitondratena iray Natsangan’i Elia mpaminany ny zanakalahin’ny mpitondratena iray tao Zarefata, tany avaratr’Israely.—1 Mpanjaka 17:17-24.
Ankizilahy sonemita Nanangana ankizilahy iray avy ao Sonema i Elisa mpaminany, izay mpandimby an’i Elia. Nomeny ny ray aman-dreniny ilay zaza avy eo.—2 Mpanjaka 4:32-37.
Lehilahy iray halevina Napetraka haingana teo amin’ny toerana nisy ny taolan’i Elisa ny vatana mangatsiakan’ny lehilahy iray maty vao haingana. Raha vao nikasika ny taolan’i Elisa ilay vatany dia nitsangana ilay lehilahy.—2 Mpanjaka 13:20, 21.
Zanak’ilay mpitondratena tao Naina Nosakanan’i Jesosy ny mpandevina tany ivelan’i Naina ary natsangany ilay tovolahy saika halevina ka natolony an-dreniny.—Lioka 7:11-15.
Zanakavavin’i Jairo Niangavy an’i Jesosy mba hanasitrana ny zanany marary i Jairo, mpitantana synagoga. Natsangan’i Jesosy tamin’ny maty io zazavavy io, raha vao maty kelikely.—Lioka 8:41, 42, 49-56.
Lazarosy naman’i Jesosy Efa maty efatra andro i Lazarosy rehefa natsangan’i Jesosy teo anatrehan’ny olona maro.—Jaona 11:38-44.
Dorkasy Tia nanampy olona sy tsara fanahy io vehivavy io, izay natsangan’ny apostoly Petera tamin’ny maty.—Asan’ny Apostoly 9:36-42.
Eotyka Nianjera avy eny am-baravarankely io tovolahy io ka maty. Natsangan’ny apostoly Paoly izy avy eo.—Asan’ny Apostoly 20:7-12.
^ feh. 15 Tena niavaka ny nananganana an’i Jesosy Kristy tamin’ny maty fa tsy nitovy tamin’ireo olona valo ireo. Izany no resahin’ny lahatsoratra manaraka.
Nanangana ny maty ve i Jesosy? Raha nanangana ny maty tokoa izy, nahoana izany no mampahery antsika?
Hizara Hizara Mankaiza Isika Rehefa Maty?